इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने केडिया को हुन् ? - NepalTimes
इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने केडिया को हुन् ?
८ असाेज, काठमाडौं ।
गायिका इन्दिरा जोशीले फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग इंगेज्मेन्ट गरेकी छन् । उनीहरु हेलिकोप्टरमा खुम्बु पुगेर औंठी साटासाट गरेका हुन् ।